‘မီးဟုန်းဟုန်းတောက်မည့် မြန်မာပြည်’ ဆောင်းပါး – ‘ဆရာဝန် တစ်ဦး’ (၁၉၈၈)ခုနှစ် Copy & Paste | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ‘မီးဟုန်းဟုန်းတောက်မည့် မြန်မာပြည်’ ဆောင်းပါး – ‘ဆရာဝန် တစ်ဦး’ (၁၉၈၈)ခုနှစ် Copy & Paste
‘မီးဟုန်းဟုန်းတောက်မည့် မြန်မာပြည်’ ဆောင်းပါး – ‘ဆရာဝန် တစ်ဦး’ (၁၉၈၈)ခုနှစ် Copy & Paste
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 16, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
အလွန်ဘဲကောင်းပါသည်။လွန်ခဲ့ပြီ ဆိုပေမဲ့ ရွှေမြန်မာများ အခုထိ အကျင့်ဆိုးများအား လက်ဆင့်ကမ်းနေတုန်းပင်။
ဖတ်စေချင်လို့ပြန်ကူးပြီး တင်ပေးတဲ့ အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
သို့ သော်လည်း စာဖတ်အားလဲ ကောင်းစေချင်ပါတယ် ။
မန်းလေးဂေဇာတ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တင်ပစ်လိုက်မယ် ကော်ပီထည့်လိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး
မဖြစ်စေချင်ပါဘူး ။ တစ်ယောက်ယောက်က တင်ထားတာ ကာလ အတန်ကြာလို့ မသိလိုက်ဘူးဆိုတာ
မျိုးကို နားလည်ပေးလို့ ရပေမဲ့ လောလောလတ်လတ် မပုတ်မသိုးသေးတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ
ဒီ ကော်ပီ အကြောင်းအရာကို တင်ထားတဲ့သူ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ် ။
အရင်ဆုံး လေ့လာပါ…..ပြီးရင် ပြောပါ ။
ဒီ အောက်က လင့်ကတော့ ပထမလူရဲ့ကော်ပီ စာမူပါ ။
ကော်ပီ ကူးတာလဲ ကူးကြပေါ့ ။
တော်ကြာ ဟို သေခါနီး အဆိုတော်မကြီးနဲ့နောက်ပေါက် အဆိုတော်မတို့ 
သူများ နိုင်ငံက ဘောလုံးသီချင်း သံစဉ်ကို စားခွက်လုပြီး ကျမကသာလျင် မူပိုင်ရှင် ဆိုတာမျိုး
I am so sorry for duplicate post.
I didn’t realize that post has already been here even though I have read some post.
Yes… I admit it I was so lack of knowledge how to make copy & paste.
If I know it, I will make comment on it.
Please do delete it for me Kai.
သိပ်ကို လေးစားဖို့ ကောင်းတဲ့ ၀န်ခံမှုပါပဲ မခင်လတ် ။
နောက်ထပ် ဖတ်သင့်တဲ့ စာမူတွေ စောင့်မျှော်နေပါမယ် ။
I was so excited as soon as I read that article.
That excited rush motion made me down.
It’s totally my fault and I have to be careful well in the future. :-)
Please give me the advice if you know how to delete the Post.
ပိုစ့်ကို ဖျက်ပေးနိုင်တာ ကိုခိုင် တစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ Delete လုပ်ဖို့ မတောင်းဆိုစေချင်ဘူး ။
ဖတ်ခဲ့ပြီးသား ပိုစ့်တခုဖြစ်တယ် ဆိုရင်တောင် အခုလို အပြန်အလှန် ရေးသား
ဆွေးနွေးမှုဟာ စာဖတ်သူတွေကို မက်ဆေ့ဂ်ျ တစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် ။
အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ၀န်ခံတတ်ခြင်း ပါပဲ ။
Thanks …… :-)
@ Khin Latt, nigimi77
ကျွန်မ အတွက် နောက်ထပ် ရမဲ့ အကျိုးက တော့ တစ်ခုခု ကို လုပ်မယ် ဆိုရင် လောမကြီး ဖို့ပါဘဲ။
ရှေ့နောက် မကြည့်ဘဲ ကိုယ့်ဆန္ဒမြန်မြန် နဲ့ လုပ်မိတာ မှားဖို့ ပိုများပါ၏။
ဒါပေမဲ့ Comment ပေးတာတွေကို အရင် Post မှာ ဘဲ ဆက်ပေး နိုင်ကြဖို့ ကျွန်မ ရဲ့ Post Comment ကို ပိတ်ပေးပါ။
—- တော်ကြာ ဟို သေခါနီး အဆိုတော်မကြီးနဲ့နောက်ပေါက် အဆိုတော်မတို့ 
nigimi77 Comment ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ ရီ လို့ မဆုံးပါ။ ဒီလို ကွင်းကွင်း ကွက်ကွက် ထိမိ တဲ့ နမူနာပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ :-)